FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA CHIWEENIE - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Chiweenie
Alika mitambatra Chihuahua / Dachshund mifangaro
Dolly the Chiantaraie (Chihuahua / Dachshund mix) amin'ny 2 taona
Anaram-bosotra: Hotdog Meksikana
Tsy alika madio ny Chiweenie. Lakroa misy eo anelanelan'ny Chihuahua ary ny Dachshund . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
Mpanoratra International Canine Registry®= Chiweenie
Registra ny famolavolana endrika = Chiweeni
'Ity ny Sugar. Chiantaraie izy. Noraisinay izy tamin'ny vehivavy iray nandefa ny sariny tamin'ny alàlan'ny Facebook. Nasehoko ny vadiko ny sary ary nilaza aho fa misy alika be fitiavana omena. Nanaiky izy, koa nifandray tamin'ilay vehivavy namoaka ny doka nataony izahay ary nilaza fa te hampiasa Sugar. Nentiko niaraka tamiko ny zafikeliko Triston ary noraisinay izy. Natahotra sy natahotra izy tamin'ny voalohany noho ny olona naka azy sy namerina azy satria tsy afaka niaro azy ireo izy. Nihevitra aho fa misy olona mahay mandanjalanja afaka mijery azy ary hahafantatra fa ny toe-javatra dia mifanohitra tanteraka amin'ny alika kely fotsiny. Na izany na tsy izany dia ny 4 andro voalohany nijanonany tao amin'ny efitranonay teo am-pandriana tsy nihetsika mihitsy. Nanjary niahiahy momba ny fahasalamany izahay ka ny vadiko dia nampiasa tsindrona feno rano ka nampisotroiny. Farany dia nanomboka nihinana izay napetrakay tao anaty lovia nataony izy ary tamim-pitiavana sy fiheverana be dia be no nivoaka avy tao anaty akorany. Satria izaho sy ny vadiko ao an-trano ihany dia mahazo fiheverana 24 ora i Sugar. Ankehitriny dia efa simba be izy ary manantena ny fijerena ny fotoana hodiako avy any am-piasana mandra-pandriana. Atolotsika azy ity. Nitondra fahasambarana be dia be teo amin'ny fiainantsika izy. Tsy mampino izany. '
Duke the Dachshund / Chihuahua mix (Chiantaraie) amin'ny 3 taona— 'Duke dia mpamonjy an'i Chiweenie 3 taona. Tena marani-tsaina izy ary manana toetra tia. Tia mihazakazaka sy milalao ary tena fiaraha-monina amin'ny alika hafa . Alika tena tsara no ataon'izy ireo raha manana ianao trano kely fa izy ireo koa dia tia tokotanin-tsambo lehibe hihazakazaka hiditra ao. Hes a mix of a dapple Dachshund hita taratra tamin'ny fanamarihany tsy manam-paharoa fa manana ny mazava Chihuahua sofina lehibe maranitra. '
Daphnee, mixer Miniature Dachshund / Chihuahua (Chiantaraie) 3 taona - 'Ny reniny dia ny Dachshund ary ny dadan'ny Chihuahua.'
Frankie the Chiweenie amin'ny faha-4 taonany— 'Zaza kely sofina lehibe iray fotsiny izy!'
Charlie the Chiantaraie puppy 12 taona— 'Be fitiavana sy tsara tarehy i Charlie. Mbola mianatra momba azy daholo isika. Ary mbola miezaka mafy izahay fiaran-dalamby izy. Arrghhh '
Frida & Kahlo the Chiweenies amin'ny 10 volana— 'Frida sy Kahlo dia rahavavy 2 vavy' 50% Chihuahua ary 50% Dachshund . Ny renin'izy ireo dia loha-peratra mainty miloko tri-color Chihuahua ary ny rainy palitao miloko mena Miniature Dachshund. Efa nahatratra ny haben'ny olon-dehibe izy ireo, 16 santimetatra ny halavan'ny vatana, 12 santimetatra ny tratrany ary 10 santimetatra teo amin'ny hatony milanja 9 pounds tsirairay avy. Izahay dia mikasa ny hifehezana ny sakafon'izy ireo hitazomana azy ireo mahia, ka tsy hiatrika olana amin'ny lamosina izy ireo. Izy ireo dia mpivady mahafinaritra alika am-pofoana ! Fa tia koa izy ireo mandeha lavitra , fitsangantsanganana, any ivelany ary fitsangatsanganana amin'ny fiara. Izy ireo dia sarotra ny hampiofana satria mafy hatoka izy ireo, nefa tena marani-tsaina ary manam-paharetana sy mitsabo, dia mianatra fitsipika tsara. Alika be fitiavana sy milalao. Nianatra nandeha an-tongotra tsy nisy fehy izy ireo rehefa avy nandehandeha nandritra ny 10 volana tao anaty fehikibo 5 metatra fohy. Malaza tokoa ny faniriana mihaza. Mibolisatra izy ireo, saingy tsy masiaka mihitsy na mampiseho mariky ny fihetsika mahery setra. Mila haingoina na apetraka matetika ny hoho satria alika anaty trano izy ireo ary ny hoho lava dia mety hanimba ny endrika tongotr'izy ireo. Tiako ity fangaro ity! '
Frida & Kahlo ny Chiantaraies amin'ny 10 volana
Frida & Kahlo ny Chiantaraies toy ny alika kely
'Negra no rahavavin'i Frida sy Kahlo. Aseho eto amin'ny 10 volana. Chihuahua 50% izy rehetra ary Dachshund 50%. Ny renin'izy ireo dia loha-peratra mainty miloko tri-color Chihuahua ary ny rainy palitao miloko mena Miniature Dachshund. Tian'i Negra ny milalao baolina ary mitsako taolana. '
The Evil Dr Porkchops the Chiweenie (volo lava Chihuahua / Dachshund mix) ho alika kely amin'ny 10 herinandro- 'Mihaona amin'ny Dr Porkchops ratsy. Tsara anarana ho azy izy satria ny # 1 dia tianay ny Toy Story ary # 2 izy no tena mamy ary ny zavatra lavitra indrindra tamin'ny ratsy. Nomena anay izy satria ny fako dia bevohoka tsy nampoizina ary tsy tian'izy ireo daholo ny alika kely. Mamy tokoa izy! Raiki-pitia tamin'ny antsika izy Bull bull . Ny Pit antsika dia tsy nanana fako ary niteraka an'i Dr Chops. Tena mampiala voly sy tsara izy ireo. Fiofanana ao an-trano mora izany satria manana alika roa hafa izahay ka avoakanay azy isaky ny mandeha izy ireo. Nahomby kokoa noho ny nandrasana izany. Tsy azontsika ny onjam-peo Dog Whisperer. Reko fa niasa ny teknikany. Mila azy aho hanampy ahy amin'ny Doberman . Zaza 75 kilao izy ary matahotra an'i Dr Chops raha azonao an-tsaina. Misaotra amin'ity pejy ity. Tena nanampy be izany! '
'Ity no Chiantaraie Buster ahy. Tokony ho 8 volana izy eto. Miakatra hatrany ny sofiny ary fantany tsara ny zava-mitranga rehetra raha tsy reraka izy avy eo dia mivily ny sofiny roa ary manjavozavo ny masony. Manana toetra tena lehibe izy, nihalehibe izy niara-niasa tamiko ary nofonosiny daholo ny mpiara-miasa tamiko nankany amin'ny iray izy hohanina, ny iray kosa ho an'ny fikosohan-kibo ary ny iray ho fonosana. Rehefa mahazo kilalao vaovao na tsaboina izy dia mila mandeha isaky ny birao mampiseho izany! Izy dia tia ankizy, rehefa misy isika mivoaka an-tongotra tsy maintsy mandeha maka biby fiompy amin'izy rehetra izy. Fony mbola tanora izy dia nesoriko taminy ny zava-mahadomelina na napetrako teny am-bavany ny tanako raha mbola nisakafo izy, ka rehefa misy zaza manodidina ary manao izany izy ireo dia tsy hanaikitra azy ireo, ary miasa izany rehefa 2- ny namako. zaza iray taona dia misambotra zavatra aminy. Mipetraka fotsiny izy ary miandry ny haha-liana azy dia raisiny indray. Tiako ny mijery Dog Whisperer ary nampiasa ny sasany tamin'ny fombany aho, toy ny fiandrasana an'i Buster hiandry ahy hiditra / hivoaka ny trano alohan'ny hidirany. Rehefa any ivelany miaraka aminy aho, raha mahita alika hafa na olona iray hoy aho. 'No Bark' ary hojereny akaiky izy ireo fa tsy hivily. Alika marani-tsaina tokoa izy, mahazo dera be dia be aho amin'ny fahaizany tsara toetra. Tsy dia nanana olana tamin'ny fanazaran-tena aho fa mora be ny manao tranom-baravarankely ary mianatra fika haingana. '
'Ity no Chiwee Dexter mini-nay. 9 volana izy amin'ity sary ity ary mankahala ny lanezy. Manana fianakaviana hafa izy ary tsy nokarakaraina araka ny tokony ho izy, ka izahay sy ny zanako no naka azy. NY Beagle alika 12 taona dia maty ary tonga teo amin'ny fiainantsika tamin'ny fotoana tonga lafatra i Dexter. Alika mamy tokoa izy ary ny zanako 3 dia manome azy fitiavana be dia be. Manana vitsivitsy olan'ny fanofanana poti , saingy amin'ny faharetana sy fahazarana dia tokony handeha daholo izany. '
fifangaroan'ny cane corso be
Chevy the Chiweenie amin'ny faha-3 taonany
'Ity no Chiantaraie zanako lahy 1 taona antsoina hoe Luigi Von Hunkledink Sabo. Ny reniny dia a Dachshund , ray dia a Kilalao chihuahua . Efa lehibe izy, milanja 6 lbs fotsiny. Tena mahatoky sy mamy izy. Manao feo sy feo mangatsiaka mahatsikaiky indrindra izy rehefa milalao. Tena manan-tsaina izy, efa mahalala ny fomba mipetraha, mandry, miteny, mangataka, mitsangana . Mahafantatra izay mivoaka any ivelany, misaora, ary mandehandeha midika hoe! Tena reharehako izy ary tiako amin'ny foko rehetra! Tena mamy izy, ary tia mikimpy. Adinoko ny nanonona ny sofiny !! Saika mitovy lehibe amin'ny vatany iray manontolo izy ireo, ary tiany ny mifehy azy ireo. Azony atao ny mailo azy ireo, eo amin'ny sisiny (ary toa batman izy) na miverina miverina! Tena ataon'izy ireo ho iray karazana izy! '
alika tendrombohitra tendrombohitra bernese retriever volamena
Daphnee, fifangaroan'ny Dachshund / Chihuahua kely (3 taona) kely (Chiantaraie)
'Ny dadan'i Jager dia Dachshund kely madinidinika (manana ny fandokoana marina izy) ary ny reniny dia Chiweenie mena (antsasaky ny mini Dachshund / antsasaky Chihuahua).
'Jager dia sahabo ho 14 herinandro izao. Izy dia zazalahy kely falifaly sy marefo izay mikendry ny hampifaly. Tiany ny fiheverana - indraindray izy dia hibolisatra na hibontsina ho azy, na dia tsy mahasarika ny sainy aza rehefa manao an'io. Mahazo ‘zazalahy tsara sy‘ Jager tsara ’izy rehefa mangina sy mitondra tena. Mianatra 'mipetraka' sy 'midina' izy, na dia hitako fa mahaliana azy loatra aza ilay izy, mila fotoana sy faharetana fanampiny izy vao milamina tsara vao mahavita ilay tetika. Mampiofana clicker aho, ary toa mamaly tsara izy. Tiany ny baoliny — efa mahay milalao izy! Vetivety dia tratrany izany. Mipetraka ao anaty condo aho, koa manandrana mitondra azy aho, mandeha an-tongotra 10-15 minitra isan'andro farafahakeliny, mahita fa tsy manana tokontany ho azy aho. izy manaraka ny ombelahin-tongotro tsara tokoa, fa matetika izy dia tsy mahomby.
'Izy dia fandokoana tsara tarehy, ary kely dia kely. Mpivady iray no nieritreritra fa a anakà tamin'ny voalohany, ary reko fa toa a voalavo na voalavo mihoatra ny indray mandeha. Ny ankamaroany dia manana olona mihomehy sy manaitra aho ary milaza amiko fa izy no zavatra kely indrindra sy bitika indrindra hitan'izy ireo. Izy dia eo amin'ny lafiny kely —Mino aho fa tsy hitombo bebe kokoa izy. '
Jereo ohatra misimisy kokoa momba ny Chiantaraie
Chiantaraie Sary 1
Chiantaraie Sary 2
Chiarahanie Sary 3
mpiandry ondry alemanina sy terrier mix
laboratoara fanodinam-bola alemana
Sakafo alika kely 3 herinandro
alika kely mpanao ady totohondry 2 herinandro
afaka vady coyote miaraka am alika